mairie-antananarivo – Didimpoitra faobe-boriboritany fahatelo
Didimpoitra faobe-boriboritany fahatelo
Araka ny Vinan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana dia anisan’ny atao laharam-pahamehana ny Sosialim-bahoaka. Ka izany indrindra no antony nanaovana hetsika Didimpoitra faobe maimaimpoana, izay notontosaina androany maraina tetsy amin’ny biraon’ny Boriboritany fahatelo Antaninandro.
Natao koa izao hetsika izao hoy ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo Rado Andriamamonjisoa nohon’ny fangatahan’ny vahoaka teo amin’ny boriboritany ary nohenoina ny hetahetan ‘izy ireo, amin’ny fanalana ny fahasahiranan’ny Vahoaka.
Zazalahy kely miisa 33 no nahazo tombontsoa tamin’izany, 2 taona ka hatramin’ny 5 taona, izay avy ao anatin’ny fokontany 34 manerana ny Boriboritany fahatelo. Nomena malabary 2 avy isaky ny ankizy sy kilalao ary vatomamy ireo ankizy vita fora.
Dokotera 3, mpanampy 5 avy amin’ny Departemanta misahana ny fahasalamana avy amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) no nanatanteraka ny famorana ireo ankizy. Marihana fa ezaka avy amin’ny boriboritany fahatelo no nahatonga izao hetsika izao ary misy koa fiaraha-miasa amin’ny malala-tanana, ka anisan’izany ny fanomezan’ny Antoko Tiko i Madagasikara (TIM) ireo malabary 2 avy isaky ny ankizy. Mametraka fisaorana mitafotafo ny boriboritany fahatelo tamin’ny fanampiana avy amin’ireo olona nanampy rehetra tamin’izao hetsika izao.